by ပိုပိုဇော်(သဘာဝအားအင်)October 20, 2013 at 8:28am
အဟာရဓါတ်ချို့တဲ့မှု့မဖြစ်ေ စတဲ့နည်းလမ်းလေးပါ... စားရမယ့်အစီအစဉ်တွေက..
အသီးအရွက်တွေကိုအနေတော်တုံး ပြီးအိုးထဲရေမြုတ်အောင်ထည့် အဖုံးဖုံးပြီးပွက်ပွက်ဆူအနေ အထားမှာ၁၀မိနစ်ထား နောက်မှမီးကို
လျော့ပြီးအသီးအရွက်နူးတဲ့အထိချက်၇ပါမယ်... အဲဒီအရည်တွေကိုဝိတ်ချတဲ့တစ် ပတ်လုံးသောက်၇ပါမယ်...တတ်နိုင်၇င်အ၇ွက်တွေပါစား၇င်ပိုေ ကာင်းတယ်။ ပုံမှန်ဆို တစ်ပတ်ကို ၁၀ ပေါင်ကျပေမယ့်...အရွက်တွေမစားတာေ၇ာ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်တာရောကြော င့်၅ ပေါင်ဘဲကျပါတယ်
(အနံ့အရသာ၇ှိ စေဖို့ဆားင၇ုပ်ကောင်းဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေထည့်နိုင် ပါတယ်)
အဆီကျဟင်းရည်ကို ဗိုက်ဆာတိုင်းသောက်ပါ တွဲဖက်စားလို့၇တဲ့အစာတွေက လိမော်သီး ပန်းသီးသစ်တော်သီးမာလကာသီးကျွဲကောသီးကျန်တာဘာမှစားခွင့် မ၇ှိပါဘူး....အသီးတွေဘဲစား လို့၇ပါမယ်.(ငှက်ပျောသီးမပါ )
ပင်တိုင်အဆီကျဟင်းရည်အပြင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်အားလုံး အစိမ်းဖြစ်ဖြစ်ကျက်ပြီးသာြး ဖစ်ဖြစ် စားခွင့်၇ှိပါတယ်သစ်သီးကို စားခွင့်မရှိပါဘူး ကင်ထားတဲ့ အာလူးကြီး တစ်လုံး စားခွင့်ပြုပါတယ်.
အဆီကျဟင်းရည်အပြင်ပထမနေ့နဲ့ ဒုတိယနေ့က ခွင့်ပြုထားတဲ့ အစာတွေအားလုံးစားလို့ရပါတယ် .(အာလူးကင်မပါ)
အဆီကျဟင်းရည်အပြင် တစ်နေ့လုံးအတွက် ငှက်ပျောသီးရှစ်လုံး (သီမွှေးorဖီးကြမ်း)အဆီထုတ်ထားတဲ့ နွားနို့ကြိုက်သလောက်သောက်ခွင့်ရှိပါတယ်...ငှက်ပျောသီး နဲ့နွားနို့ မဖြစ်မနေသောက်၇ပါမယ် ကိုယ်ထဲကပိုတက်ဆီယမ်ပရိုတင်းနဲ့ကယ်လ်စီယမ်တို့လိုအပ်နေ ပြီမို့ပါ.
ပင်တိုင်အဆီကျဟင်းရည်အပြင် ၁၀ ၂၀ အောင်စရှိ ငါး သို့မဟုတ် အမဲသား ဆိတ်သားဆို အဆီမပါ ကြက်သားဆို၇င် အရေပြားဆုတ်ပြီးသား ကို ဆီမပါတဲ့နည်းနဲ့ ကင်ပြီး စားလို့ရပါတယ် ငံပြာရည် ဆနွင်း ဆား သုံးလို့၇ပါတယ်...ခရမ်းချဉ် သီးခြောက်လုံး အထိတွဲဖက်ပြီး ကြက်သွန်နဲ့သုပ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်သူ့ကြီးဖြစ်ဖြစ်စားလို့၇ပါတ ယ်...ကိုယ်ထဲက Uric Acid တွေကို ဆေးချဖို့ ဒီနေ့မှာ ရေ အနည်းဆုံး ရှစ်ဖန်ခွက် သောက်ပေးဖို့လိုပါတယ်.
ပင်တိုင်အဆီကျဟင်းရည်အပြင်အ ဆီလွတ်အသားများကင်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ရြေ ပုတ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်စားခွင့် ရှိပါတယ်.
နောက်ဆုံးနေ့မှာ ဆန်လုံးညိုစားခွင့်ပြုပါတယ် ၀ယ်၇ခက်ရင် ပေါင်မုန့်ကြမ်းကို အာသာပြေ၇ုံ စားခွင့်၇ှိပါတယ်အချိုဓါတ်မ ပါတဲ့သစ်သီးဟင်းသီးဟင်းရွက် တွေကြိုက်သလောက်စားခွင့်ပြု ပါတယ် ဟင်းရည်ကိုတော့ သောက်ပေး၇ပါမယ်...
ဒီခုနစ်ရက်အတွင်းအရက်လုံးဝေ သာက်ခွင့်မပြုပါ...ကော်ဖီဆိုရင်သကြားတုနဲ့ကြိုက်သလောက် သောက်ခွင့်ပြုပါတယ် လက်ဖက်ရည်ကြမ်းဆီမပါတဲ့လက်ဖ က်အသားချည်းစားနိုင်ပါတယ်.. .
SlimAidတို့လို အမျှင်ဓါတ်ပါတဲ့ေ ဆးတွေသောက်ခွင့်ရှိပါတယ်... .
ဗီတာမ င်ဆေးတွေလည်းဖြတ်ဖို့မလိုပါ ဘူး...
ခုနစ်ရက်ပြည့်လို့ သိသိသာသာ ကိုယ်အလေးချိန်ကျလို့ အားတက်ပြီးဆက်မလုပ်ပါနဲ့...
ရည်၇ှည် ဒီနည်းကိုကျင့်သုံး၇င် အဟာရဓါတ်ချို့တဲ့မှုဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
credit to >>blue sky
Posted by ပိုပိုဇော် at 19:00